Posky Boeing 777-200 na-acha ọcha, ọ dịghị imeju, ọ dịghị ihe ọ bụla
ajụjụ Posky Boeing 777-200 na-acha ọcha, ọ dịghị imeju, ọ dịghị ihe ọ bụla
1 afọ 1 ọnwa gara aga #884 by jangor
Hi, M ebudatara Posky B777-200 site na Rikooo ma weghachite ya na nlele ngosipụta na-agbake ngwá ọrụ. M tinyere ha abụọ na m nwere ụgbọelu anọ na-anọdụ na folda ụgbọelu m. Otú ọ dị, mgbe m meghere ha, ha na-acha ọcha, ọ dịghị imeju, enweghị ihe ọ bụla, enweghị nkọwa, ọ dịghị igbe ọ bụla. Naanị shea ọcha.
Enwetara m ma tinye ọtụtụ B777 ọzọ site na Rikooo na site na ebe nrụọrụ weebụ freeware, ma ọ bụ otu mgbe. Enwere m ike ịsị na FSX na-agbaso B777. Otu, n'ụzọ, mere De Haviland Dash 8-400. Ana m ezipụ nseta ihuenyo nke ụgbọelu ọcha ahụ.
Kedu ka m ga esi edozi nke a ka ọ na-ewe iwe.
1 afọ 3 izu gara aga #910 by Parky-Joe
Gaa na ntọala ma dezie ya mgbe ahụ ka ịpịa bọtịnụ 'DirectX 10' hụ na imeju gị niile ga-anọ ebe ahụ. Enwere m otu ihe a n'onwe m ma chọpụta otu m ga esi edozi ya site na izu nke ule na njehie. Nwere olileanya na ọ na-arụ ọrụ maka gị.